ရေသူမလေး Ariel အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် အဆိုတော် Halle Bailey | Buzzy
ရေသူမလေး Ariel အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် အဆိုတော် Halle Bailey
Disney က ရွေးချယ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ရေသူမလေး...
နောက်ဆုံးတော့ Disney က ရေသူမလေး Ariel အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့်သူကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါပြီ။
Disney က ပြန်လည်အသက်သွင်းရိုက်ကူးမယ့် live action "The Little Mermaid" ဇာတ်ကားမှာ Ariel အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကို ဒါရိုက်တာ Rob Marshall က အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမေရိကန်အဆိုတော်မလေး Halle Bailey ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Rob Marshall က "သေချာရွေးချယ်စိစစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Halle ဟာ ဒီ Ariel ဇာတ်ရုပ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းတဲ့အသံ၊ငယ်ရွယ်မှု၊ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်နှလုံးသားစတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်"လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။Halle Bailey ကလည်း သူမရဲ့တွစ်တာမှာ ရေသူမလေးပုံကိုတင်ထားပြီး အိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေးမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
သူမကို Ariel အဖြစ်ရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇာတ်ကောင်နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့အသွင်အပြင်လို့ တစ်ချို့က ဝေဖန်ထားကြပေမဲ့ ပရိသတ်အများစုကတော့ သူမကို ရေသူမလေးအဖြစ်ဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်မှုတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။The Little Mermaid ကို ၂၀၂၀ မှာစတင်ရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
Halle Bailey,aBlack teens who wears locs, being cast asaDisney princess is what dreams are made of. Imagine what just seeing her onscreen will do for this generation of Black girls.
— Evette Dionne (@freeblackgirl) July 3, 2019
I look forward to taking my daughter to see Halle Bailey as Ariel in the live action version of Little Mermaid. She'll be ecstatic seeing another girl of color asaDisney princess. I will have to tolerate the songs, but...worth it.
— Wajahat Ali (@WajahatAli) July 3, 2019
အိပ်နေရင်း ဘီလူးစီးခံရခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိကောင်းစရာလေးများ
Porn Star တွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးလို့ ဆိုတဲ့ ဆယ်ဦး
ငယ်ငယ်တည်းက ဘူးတဲ့ချာတိတ်လေးတွေရဲ. ရယ်စရာ ဓါတ်ပုံ ၂၀
နာမည်ကြီးလာတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးလေးရဲ့နောက်ကွယ်ဇာတ်လမ်းကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ
ဆံပင်ဖြောင့်ဖို့အတွက် စက်တွေသုံးပြီး ဆံပင်တွေအပျက်စီးခံ၊အပူလောင်ခံနေအုံးမလို့လား?